Taliyaha guud ee booliska oo eedeyn loo jeediyay – The Voice of Northeastern Kenya
Taliyaha guud ee booliska oo eedeyn loo jeediyay
starfmke August 5, 2016
Masuuliyiinta Laanta daba galka howlaha booliska dalka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaanno IPOA ayaa taliyaha guud ee ciidamada booliska Joseph Boinet waxa ay ku eedeeyeen in uu is hor taagayo baaritaannada ku aadan khaladaadka ay booliska sameeyaan.
Mr Boinet ayaa lagu dhaliilay in askarta la tuhmo u ku amro in aysan wax wada shaqeyn ah la sameynin hay’adaha ku howlan baaritaannada oo dhinacyo kala duwan la xiriira.
Saraakiisha IPOA ayaa sidoo kale sheegay in Joseph Boinet uu ciidamadiisa ku amray in dambi baareyaasha ka socda laanta IPOA aysan u ogolaanin in ay galaan xarun ay booliska leeyihiin, ilaa uu isaga oo ah taliyaha fasax u siiyo.
Gudoomiyaha hay’adda IPOA Macharia Njeru oo hoggaaminayay xubnaha kale ee hay’addiisa ayaa cambaareyn kulul dusha uga tuuray Mr Boinet, isagoo sheegay in u isku dayayo in u fara galiyo oo uu maamulo howlaha laanta IPOA oo ah mid madax bannaan.
Njeru ayaa sheegay in ay jiraan howlgallo badan oo shaqaalaha IPOA laga hor istaagay in ay sameeyaan, taasina ay tahay mid masuuliyadeeda salka ku heyso abaan duulaha booliska Joseph Boinet.
Hadalka kasoo baxay hoggaanka IPOA ayaa ku soo aaday xili dhawaan xabsiga loo taxaabay mid ka mid ah howlwadeenada hay’addaasi, kadib markii lagu eedeeyay in uu amar la’aan baaritaanno qarsoodi ah ku sameynayay askar ka tirsan booliska.
← Dowlada Iran oo 20 qof oo Muslimiin Suuni ah xukun daldalaad ah ku fulisay
3 bangi oo loo ganaaxay musuqmaasuqa NYS-ta awgiis →